GTT International - Genève: FANAMBARAN'NY GTT INTERNATIONAL - GENEVE
FANAMBARAN'NY GTT INTERNATIONAL - GENEVE
hampihatra ny sazy faran’izay henjana ho an’Andriamatoa Andry Rajoelina amin’izao fanitsakitsahany ny herimpon’ny SADC sy ny Malagasy iray manontolo izao.
handray ny andraikiny hampody sy hitondra ary hiantoka ny fiarovana amin’ny fomba rehetra ny Filoha Ravalomanana any an-Tanindrazana, ahafahana manatontosa ny Fihaonan’ny samy Malagasy ao Antananarivo.
tsy hanao fihaonana fandanian’andro intsony fa hijery ny tombotsoan’ny Malagasy izay efa mihamaty tsikelikely amin’ny lafiny rehetra (3/4 ny Malagasy dia miaina ao anatin’ny fahantrana farahidiny hoy ny INSTAT).
Anonyme 10 août 2012 à 09:23
Marina mihitsy izany. Tokony ho saziana satria olona tsy voafidy Rajoelina fa mpanongam-panjakana, kanefa dia manao otage ny vahoaka malagasy, mahantra. Ny fari-piainana mitontongana, betsaka ny zaza tsy mianatra,...
ONY 10 août 2012 à 23:07
Hotanteraka anie ireto rehetra ireto @izay raha tsy izàny dia ho eo faona io Andry Rajoelina io mandritran'ny 10(folo) taona :
"hampihatra ny sazy faran’izay henjana ho an’Andriamatoa Andry Rajoelina amin’izao fanitsakitsahany ny herimpon’ny SADC sy ny Malagasy iray manontolo izao.
Farany, miantso ny Malagasy rehetra izahay handray an-tànana ny hoavin’ny Tanindrazana ary tsy hanadino fa mpandroba fahefana i Andry Rajoelina ka tsy mendrika ny antsoina hoe Filoha velively akory. Ny Filoha dia iray ihany: Atoa Marc RAVALOMANANA izay voafidim-bahoaka."